Okokuqala eJamaica: IJakes Ihotele ifikelela kwi-100% yokuGonya
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe » Iindaba zaseJamaica zokuPhula » Okokuqala eJamaica: IJakes Ihotele ifikelela kwi-100% yokuGonya
Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Caribbean • Iindaba zikaRhulumente • Iindaba zeMpilo • Icandelo lokungenisa izihambi • Iihotele kunye neeholide • Iindaba zaseJamaica zokuPhula • iindaba • Safety • Tourism • Ukuhlaziya indawo ekuyiwa kuyo
Ihotele iJakes eJamaica
UMphathiswa wezoKhenketho eJamaica, u-Hon Edmund Bartlett uncoma indawo yodumo yoNxweme loMzantsi, iJakes Hotel kunye neJack Sprat, ekufezekiseni iipesenti ezili-100 zabasebenzi ezithatha zombini iidosi zokugonya ze-COVID-19.
IJakes ihotele yindawo yokuqala kunye nokuphela kweJamaica ukuza kuthi ga ngoku ukufezekisa oku phantsi kwephulo lokugonya kwezokhenketho.
Ukhenketho lukwimeko yomhlaba jikelele kwaye abahambi bafuna iindawo ezikhuselekileyo ze-COVID zamava abo ohambo.
Amanye amaziko kuNxweme oluseMazantsi athabatha inxaxheba kwilinge lokugonya kuthiwa akwinqanaba eliphakathi kwama-40 nama-70 epesenti.
Zezokuqala nezokuphela eJamaica ukuza kuthi ga ngoku ukufeza oku phantsi kwephulo lokugonya kwezokhenketho le-Ofisi yoMphathiswa Wezokhenketho kunye neJamaica Hotel kunye noMbutho wabakhenkethi abasebenza ngokubambisana neNkqubo yokuGonya iCandelo labucala.
Ngokuncoma uJakes nabasebenzi, uMphathiswa uBartlett uthe, “Ndiyamncoma uJakes ngokumisela isantya kwiphulo lokugonya bonke abasebenzi bezokhenketho. Umzi-mveliso wokhenketho ikwi-rebound kwihlabathi jikelele kwaye abahambi bafuna iindawo ezikhuselekileyo ze-COVID zamava abo ohambo. Ukuba sifuna ukufumana eyona mbuyekezo iphezulu abasebenzi bethu bezokhenketho kufuneka babonakalise ukuzimisela kwabo ekuzikhuseleni, kwabo basebenza nabo, kwiintsapho zabo nakwiindwendwe zethu ngokuthatha isitofu sokusindisa ubomi. ”
Amanye amaziko oNxweme oluseMazantsi athabatha inxaxheba kwilinge lokugonya kuthiwa akwinqanaba eliphakathi kwama-40 nama-70 eepesenti, ubukhulu becala enesitofu sokuqala sezidosi ezimbini.
Ekuqaqambiseni impumelelo ye- “Jakes Family”, uJason Henzell, uSihlalo weJakes Hotel, Villas & Spa uthe: “Siyazingca ngabasebenzi bethu abangama-125 abaphumeleleyo. UJakes uzabalazela ukuba ligosa elilungileyo lezokhenketho loluntu, esazi ukuba impilo kunye nokukhuseleka kwabasebenzi kunye neendwendwe, kunye noluntu ngokubanzi lwe-Treasure Beach, kwaye eneneni iJamaica nehlabathi liphela, zibaluleke kakhulu kuthi njengendawo yokubhenela. ”
Esibalisela ngendlela ekwenziwe ngayo oku, uMnu. Henzell wathi yayikukwenza “nantoni na eyimfuneko kunye nokudibana nabo naphi na” baziva bekhululekile. Sichithe ixesha elininzi nabasebenzi bethu malunga nokufundisa ngembali yogonyo eJamaica kunye nokusebenza kwesitofu ngasinye se-COVID-19. Senze amalungiselelo okuba badibane noogqirha, sibenzele amadinga, sibalungiselele izinto zokuhamba nokuba sibalande emizini yabo, abanye babo bebehamba ngemoto yam, ”uxele.
Umnumzana Henzell ukwagxininise ukubaluleka kokuba novelwano, kuba abantu abanentloni baya kusebenza kubo. Wayekuvuyela ukusebenzisa indlela enenkathalo nenengqiqo, esongeza esithi: “Siyazingca kwaye sicinga ukuba oku kuya kuthetha lukhulu kurhwebo lokuhamba.”
Ngokuphathelele kwiphulo lesizwe lokugonya abasebenzi bezokhenketho, uMnu. Henzell uthe: "Zininzi izinto ezithembayo, ungangxami kule nkqubo kwaye ubanike nasiphi na isizathu sokuziva besoyikiswa." Wongeze wathi: “Ukuba silulandela lonke uphando kunye nawo onke amanani athe apapashwa, ukugonywa kukunika inqanaba eliphezulu kakhulu lokuphumelela kwiintsuku ezimbi ze-COVID ukuba wosulelekile, kungoko ndicebisa ukuba ucinge isitofu kwaye uthethe nogqirha wakho malunga nokuba yeyiphi efanelekileyo ekufaneleyo. ”